थाहा छ ? फिटकिरीले रातारात बदलिदिन्छ तपाईको भाग्य – Online Nepal Site
यकाबिहानै आयो दु:खद खबर भारतमा भएको सडक दुर्घटनामा नेपाली दम्पत्तीको निधन, नाबालक २ छोराले अभिभावक गुमाए
मुख्य पृष्ठ /Intresting/थाहा छ ? फिटकिरीले रातारात बदलिदिन्छ तपाईको भाग्य
1,741 Less thanaminute
एजेन्सी । हाम्रो घरमा केही यस्ता चीज हुने गर्दछन् जसको फाइदाका बारेमा हामी अनविज्ञ हुने गर्दछौँ। तपाईले कयौँ पटक त्वचामा जलन हुँदा वा घाउँ भएमा फिटकिरीको प्रयोग गर्नु भएको होला। आज हामी तपाईलाई फिटकिरीका यस्ता चमत्कारी गुणका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जुन कमैलाई मात्र थाहा हुन सक्छ।
यदी तपाईलाई रातमा नराम्रो सपना आउने गर्दछ र नराम्रो सपनाबाट दिक्क हुनुभएको छ भने फिटकिरीको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सुत्नुअघि ओछ्यानमा कालो कपडामा बाँधेर किटकिरीलाई राख्नुहोस्। यसो गर्दा नराम्रो सपना आउन तथा निद्रा नलाग्ने समस्या हट्ने गर्दछ।
हाम्रो घरमा केही यस्ता चीज हुने गर्दछन् जसको फाइदाका बारेमा हामी अनविज्ञ हुने गर्दछौँ। तपाईले कयौँ पटक त्वचामा जलन हुँदा वा घाउँ भएमा फिटकिरीको प्रयोग गर्नु भएको होला। आज हामी तपाईलाई फिटकिरीका यस्ता चमत्कारी गुणका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जुन कमैलाई मात्र थाहा हुन सक्छ।
भूलेर पनि नगर्नुहोस् भगवानका यी ५ मूर्तिको दर्शन, हुन्छ निकै अशुभ